वनमन्त्री आले भन्छन्– मैले आफ्नो पेट काटेर सहयोग गर्न नपाउने ? - Sidha News
वनमन्त्री आले भन्छन्– मैले आफ्नो पेट काटेर सहयोग गर्न नपाउने ?
मन्त्री आलेले भने व्यक्तिगत खर्चमा किनिएका सामग्री डोटी र धनगढीका अस्पतालमा दिएको बताए । ‘१५ वटा स्वास्थ्य विभाग टेकुले दिएको छ । ११० वटा मैले मेरो खल्तीको पैसा हालेर किनेको हुँ,’ मन्त्री आलेले हिसाब सुनाए, ‘तीमध्ये ७५ वटा डोटी जिल्लाभरि र ५० वटा धनगढी सेती प्रादेशिक अस्पतालमा पठाएको छु ।
यसैगरी दुई लाख मास्क डोटीमा र ५० हजार मास्क धनगढीको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा दिएको छु । अनि चारवटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर डोटीमा दिएको छु । यी सामग्री ढुवानी गर्न मात्रै एक लाख ८० हजार जति खर्च भएको छ ।’